Vaovao - Zavatra Tokony ho Fantatrao momba ny Fiber Optic Media Converter
Miaraka amin'ny fitomboana andrasana amin'ny serasera ankehitriny, ny mpandraharaha tamba-jotra dia tsy maintsy mahafeno ny fitomboan'ny fitomboan'ny fifamoivoizana sy ny fangatahana fitomboan'ny bandwidth rehefa mampiasa tanteraka ny fampiasam-bola amin'ny fotodrafitrasa misy eo amin'ny tamba-jotra. Raha tokony havaozina sy haverina ho lafo be ny fibres, ny mpanova haino aman-jery fibre dia manome vahaolana mahomby amin'ny alàlan'ny fanitarana ny fiainana ny cabling efa voarafitra efa misy. Ahoana no ahafahan'ny mpanova haino aman-jery fibre manatratra izany? Ary inona no fantatrao momba an'io? Androany, ity lahatsoratra ity dia hilaza aminao zavatra momba ny mpanova ny fibre optic media.
Inona no atao hoe fibre Optic Mpanova haino aman-jery?
Fiber optic media converter dia fitaovana tambajotra tsotra izay afaka mampifandray karazana haino aman-jery roa samihafa toy ny mpivady miolakolaka miaraka amin'ny cabling optique optic. Ny asany dia ny fanovana ny signal elektrika ampiasaina amin'ny tambazotra varahina tsy voaroaka varahina (UTP) ho lasa hazavana maivana izay ampiasaina amin'ny famatrarana fibre optika. Ary ny mpanova haino aman-jery fibre optika dia afaka manitatra ny halaviran'ny fandefasana amin'ny fibre hatramin'ny 160 km.
Rehefa mivoatra haingana ny serasera fibre optika dia manome fifindra-monina tsotra sy malefaka ary ara-toekarena amin'ireo tambajotra fibre optika ho avy ny mpanova fibre optic. Ankehitriny dia efa be mpampiasa amin'ny faritra ao an-trano, ny fifandraisana eo amin'ny toerana sy ny rindranasa indostrialy.
Karazana fibre iraisana Optic Media Converter
Ireo mpamadika ankehitriny dia manohana ireo kaonty fifampiresahana data maro isan-karazany ao anatin'izany ny Ethernet, PDH E1, RS232 / RS422 / RS485 ary koa ny karazana cabling marobe toy ny mpivady miolakolaka, multimode ary fibre modely tokana ary optika fibre tokana. Ary izy ireo dia misy amin'ny endriny samihafa eny an-tsena arakaraka ny protokolol. Ny mpanova haino aman-jery varahina-ho-fibre, mpanova haino aman-jery fibre ary mpanova haino aman-jery serial-to-fibre dia ampahany amin'izy ireo ihany. Ity misy fampidirana fohy momba ireo karazana mpanova haino aman-jery fibre optika mahazatra.
Rehefa mihoatra ny halaviran'ny fampitana ny cabling varahina ny elanelana misy eo amin'ny tambajotra roa dia mampisy fahasamihafana lehibe ny fifandraisana amin'ny optika. Amin'ity tranga ity, ny fivadihan'ny varahina-to-fibre amin'ny alàlan'ny mpanova haino aman-jery dia ahafahan'ny fitaovana tambajotra roa miaraka amin'ny seranana varahina mifandray amin'ny halavirana lavitra amin'ny alàlan'ny fibre optika.
Ny mpanova haino aman-jery fibre-to-Fiber dia afaka manome fifandraisana misy eo amin'ny tariby tokana sy multimode ary eo anelanelan'ny fibre roa sy ny fibre tokana. Ankoatr'izay, manohana ny fiovam-po izy ireo avy amin'ny halavan'ny halavan'ny sasany. Ity mpanova haino aman-jery ity dia ahafahana mampifandray lavitra ny tambajotra fibre.
Ireo mpanova haino aman-jery serial-to-fibre dia mamela ny fambara RS232, RS422 na RS485 hafindra manerana ny rohy fibre optika. Manome fanitarana fibre ho an'ny fifandraisana varahina protokol serial izy ireo. Ho fanampin'izany, ireo mpanova haino aman-jery serial-to-fibre dia afaka mamantatra ny tahan'ny baud signal an'ireo fitaovana serial feno duplex mifandray ho azy. RS-485 fibre converters, RS-232 fibre converters ary RS-422 fibre converters no karazana mahazatra mpanova haino aman-jery serial-to-fibre.
Torohevitra momba ny fisafidianana ny fibre Optic Media Converter
Fantatray ireo karazana mpanova haino aman-jery fibre optika mahazatra, fa ny fomba misafidy iray mety dia mbola tsy asa mora izany. Ireto misy torohevitra vitsivitsy momba ny fisafidianana mpanova haino aman-jery fibre optika mahafa-po.
1.Ataovy mazava tsara raha ny rafitra chip an'ny mpanova haino aman-jery fibre dia manohana ny rafitra antsasaky ny duplex sy ny duplex feno. Satria raha ny rafitra antsasaky ny duplex fotsiny no ampiasain'ny haino aman-jery mpanova haino aman-jery dia mety hiteraka fatiantoka matotra izany rehefa apetraka amin'ny rafitra hafa.
2.Ataovy mazava ny tahan'ny angona ilainao. Rehefa misafidy mpanova haino aman-jery fibre ianao dia mila mifanandrify amin'ny hafainganam-pandehan'ireo mpanova amin'ny lafiny roa. Raha mila ny hafainganam-pandehanao roa ianao dia azonao atao ny mandinika ireo mpanova haino aman-jery roa.
3.Ataovy mazava raha mifanaraka amin'ny IEEE802.3 ny mpanova haino aman-jery. Raha tsy mifanaraka amin'ny fenitra io dia hisy ny olana mifanentana tanteraka, izay mety hiteraka olana tsy ilaina amin'ny asanao.